> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Motorola Xoom
Ma u baahan tahay inuu ka soo kabsado sawiro ka kiniin Motorola Xoom2?
Cidna ma oga sida ay u soo kaban photos tirtiray ka kiniin Motorola Xoom2? Waxaa jira tan oo PIC of our arooska on kaadhka xusuusta ku qalabaysan aan kiniin. Runtii waxaan u baahan tahay si aad u hesho dib. Talo kasta oo arrintan ku saabsan waxaa laga jeclaan lahaa.
Kuwa arooska photos waa in uu noqdaa mid aad u qaali ah in aad. Ma xasuuso inaad iyaga gurmad ugu horeysay ka dib markii uu toogtay sawiro ama videos gaar ah oo muhiim ah waqtiga soo socda. Jeer Good marnaba ku soo noqon doonaan. Waa hagaag, ha noqon si niyad. Haddii aanad waligaa hadda loo isticmaalo kiniinka la kaadhka xusuusta gudaha si sawirro cusub ama videos qaado, oo si fiican u hayn ka dib markii Kabcada_, weli waxaad iyaga oo dhan bogsan karaan kiniin. Akhri si aad u hesho faahfaahin ah ee xalka.
Kabsado photos tirtiray kiniiniyada Motorola Xoom
Ka hor inta aanan waxba qaban oo kale, aad u hesho a Motorola Xoom kabashada sawir qalab: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac .
Labada ka mid ah barnaamijyada soo kabashada sawir waa la isku halayn karo oo xirfadle ah. Awoodaan in ay u isticmaalaan inay ka soo kabsadaan sawirada tirtiray ka Morola Xoom, iyo sidoo kale ka soo kabsado video iyo maqal ah files Waxaad tahay, wax dhib ah maleh haddii aad tirtiray, laga badiyay, iyaga formatted oo dhan sababo sababtoo ah MIS-hawlgallada, kaadhka xusuusta kharribeen ama kale. Si aad u buuxiso dib u soo kabashada, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay sameeyaan 3 tallaabo. Bal aan hadda halkan inaad ku socotaan marayo.
Download version maxkamad free of this Motorola, car, software kabashada sawirka hadda. Dooro nooca aad rabto in aad computer.
Step1. Orod barnaamijka Motorola Xoom kabashada sawir
Orod barnaamijka iyo waxaad heli doontaa interface koowaad soo socda. Guji "Start" si ay u bilaabaan soo kabashada sawir Motorola Xoom. Ka hor inta aanad bilaabin, hubi in aad ku xiran aad kaadhka xusuusta ama kiniin ah si aad u computer si fiican.
Step2. Sawirka files badiyay aad Motorola Xoom
Halkan, kiniin la tusay doonaa sida warqad drive ah (halkan waa "I"), waxa ay dooran oo guji "Scan" si aad u ogaato dhammaan faylasha lumay ee aad kaniini Motorola Xoom.
Step3. Sawirka iyo kabsado sawirada tirtiray ka Motorola Xoom
Ka dib eegis ah, faylasha recoverable oo dhan waxaa laga helaa oo u muuqdaan in qaybaha sida audio, sawir iyo video. Ka hor inta soo kabsado, waxa aad awoodi kartaa in ay ku eegaan oo dhan photos ka mid kale ka dib markii si loo xaqiijiyo kuwa aad u baahan tahay. Markaas hubi iyo soo ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha xusuusan in uu kaydiyo faylasha recovere ku saabsan Motorola Xoom ama kaadhka xusuusta. Raadi kale waddada, waxaa ka badbaadin sida aad PC ama qaar ka mid ah oo kale disk, tixgelin ah ee walaac ammaanka.
Video tutorial soo kabashada sawir Motorola Xoom